Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Merera Gudina oo Sheegay In Kabadan 50-Kun oo Qof oo Oromo Ah Xabsiga Loo Taxaabay.
Dr. Merera Gudina oo Sheegay In Kabadan 50-Kun oo Qof oo Oromo Ah Xabsiga Loo Taxaabay.
Posted by Daljir	/ July 6, 2016
Waraysi lala yeeshay Dr. Merera Gudina oo ah Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee loo yaqaano Oromo Federalist Congress ayaa sheegay in ciidamada Sirdoonka ee Woyanhu ay xabsiga u taxaabay dad ka badan 50 Kun oo qof oo Oromo ah oo dhalinyaro u badan.
Dr. Gudina ayaa intaas ku daray in dhalinyaro badan oo Jaamacadaha wax kabarata jeelka loo taxaabay si uu gumaysiga Itoobiya u xakameeyo kacdoonka shacabka ee ka socda gobolka Oromiya. Banaanbaxyada iyo kacdoonka shacbka ayaysan xukuumada Woyanhu ku guulaysan in ay xakamayso. Ciidanka Gumaysiga oo awood military adeegsanaya ayaa dhalinyarada aad ujidh dilay kadibna jeelasha u taxaabay.
Dhanka kale waxaa halkoodii ka sii socda mudaharaadyadii ay wadeen shacabka gadoodsan ee ka soo horjeeda xukuumada TPLF oo kasii daraya maalimba maalinta ka dambaysa.
Hay’daha xuquuqul Insaanka udooda sidan Human Rights ayaa aad u cambaareeyay falkaas uu ciidanka Gumaysigu kutalaabsaday. Itoobiya ayaa beesha caalamka ka gashay meel xun ku xadgudubka xuquuqda aadamaha. Waxaana aad looga dayriyay xad gudubyada baahsan ee taliska Itoobiya ay shacabka kula kacaan.
Waxaa xusid mudan in dhagaysigii lagu qabtay aqalka Congress-ka ee Marykanka dhagaysigaas oo kusaabsanaa xad gudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ay iskaga bexeen waftigii Gumaysiga Itoobiya u matalayay shirkaas kadib markay u adkaysan waayeen eedaymaha loosoo jeediyay iyagoo ku fashilmay ineey eedaymahaas jawaabo qanciya ergooyinka kulankan kasoo qaybgalay layimaadaan madasha.
Sikastaba ha ahaatee xukuumada wayaanaha ayaa kucaan baxday macangagnimo iyo gumaadka joogta ah oo ciidamadoodu ay ugaystaan dadka shacabka ah ee aan isdifaaci karin.